Sony Xperia XZ2 na XZ2 kọmpụta, ewepụtala ya ugbu a | Akụkọ akụrụngwa
Sony Xperia XZ2 na XZ2 Compact, egosiputala n'ihu ọha
Sony ewebeghị ogologo oge iji gosipụta ngwaọrụ ya ozugbo ewepụtara ụdị asọmpi ọhụrụ. N'ụtụtụ a na 08:30 anyị gara mmemme ahụ ha kwadebere maka MWC nke afọ a. Dị ka oge ụfọdụ gara aga, ụlọ ọrụ ahụ malitere ịrụ ọrụ n'oge na-adịghị anya ma anyị enweela nke ọhụrụ Sony Xperia XZ2 na XZ2 kọmpat.
Ihe mbu anyi huru banyere igwe ohuru abuo a bu na ha megharia imewe na Sony gara n’agwugwu ma nkuku ma n’azu. Ngwaọrụ ọhụrụ ndị a sitere na ụlọ ọrụ ndị Japan gbakwunye ngwaike dị ike, na 4G nke RAM, 64 GB nke nchekwa, ihe nhazi Qualcomm Snapdragon 845, ụfọdụ ihe ngwanrọ na-atọ ụtọ na mgbanwe ndị Fans nke ika ga-amasị.
1 Uche Ejiji Igwe
2 Xperia XZ2 kọmpat nkọwa
3 Nkọwapụta Xperia XZ2
Uche Ejiji Igwe
Ọdịdị ahụ gbanwere, dịka enwere ike ịhụ na nkwụsị ahụ, Xperia ọhụrụ a nwere usoro dị n'okpuru, dịka Sony si kwuo, bụrụkwu akụnụba mgbe ijide ya. You hụrụ n'ezie usoro a mgbe anyị jidere ha na XZ2 Compact, ọ ga-akawanye mma, mana anyị enweghịkwa ike ikwu na ha etinyela onwe ha n’ihe gabigara ókè ka ọ na-adị na ụlọ ọrụ ahụ.
Ndị ọnụ ya dị ntakịrị karịa ndị ọzọ na-asọmpi na ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu tinye iko kama ígwèMa na ihu ma na azụ ha ugwu ozodimgba iko 5. Na ma ụdị anyị nwere mode nke super ngwa ngwa ngagharị ndekọ na 960 fps na Full HD (oke nwayọ nwayọ) otu ihe ọhụụ ahụ na okike 3D na otu okwu stereo
Xperia XZ2 kọmpat nkọwa
Ihe dị iche iche mara mma na mgbakwunye na mmụba nke njedebe ahụ n'onwe ya nwere ekele site na ngbanwe nke ọnọdụ na ọnọdụ nke ọkụ ọkụ LED na ihe mkpịsị aka mkpịsị aka karịa site na nha nke ngwaọrụ n'onwe ya. na kọmpat kọmpụta ọ dị nso na mkpịsị aka mkpịsị aka. Ndị a bụ nkọwa nke obere ihe nlereanya:
5.0 nke anụ ọhịa Full HD ihuenyo, HDR, 18: 9, SDR na HDR ntụgharị
4GB na 64GB gbasaa site na microSD
19 megapixels maka igwefoto Motion Eye n'azụ, f 1.8, 4K HDR vidiyo ndekọ, 3D Okike, na megapixels 5 maka ihu
O nwere batrị 2,870mAh nke na-akwụ ụgwọ ikuku
USB 3.1 ụdị C na akara mkpisiaka aka
High-Res, S-Force stereo ọkà okwu
Nkọwapụta Xperia XZ2
Na maka ụdị 5,7 nke anụ ọhịa ndị a Xperia XZ2 anyị nwere nkọwa ndị a:
Nke a nwere ihuenyo 5.7-anụ ọhịa Full HD, HDR na SDR na HDR ntụgharị na akụkụ akụkụ: 18: 9
Nhazi ahụ bụkwa Snapdragon 845
4GB nke Ram na 64GB gbasaa site na microSD
Anya 19 megapixel Motion na 4K HDR vidiyo vidiyo, f / 1.8,960fps Full HD, Dual Flash, onye okike 3D maka igwefoto azụ na 5 MP maka ihu
3,180mAh batrị na ikuku na-akwụ ụgwọ (50% ụgwọ n'otu awa) na ọdụ USB-C
High-Res na stereo ọkà okwu na S-Force Dynamic Vibration technology
Sony Xperia XZ2 dị ọnụahịa dị na euro 799 ma ya mere ọ ga-abanye n'ime ndị ọzọ nke asọmpi ngwaọrụ maka ahịa nke ha na-akwụsi ike, ikekwe ọnụ ahịa ga-adị mma maka ha. N'ihe nlereanya Sony XZ2 Compact anyị nwere ike ịchọta ya na euro 599.
A na-atụ anya na site na Eprel ụdị abụọ ahụ dị n'ahịa asọmpi nke chọrọ mgbalị kachasị site na ụdị niile. Anyị na-aga n'ihu ịhụ ozi ọma na MWC 2018 a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Telephony » Mobiles » Sony Xperia XZ2 na XZ2 Compact, egosiputala n'ihu ọha
Sony Ear Duo, ụlọ ọrụ ahụ na-ekwusi ike. Siri na Google nnyemaaka ekweisi